राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री रिजालको पालामा हट्यो नक्साबाट चुच्चो भाग ! - News25 Daily
June 15, 2020 adminLeaveaComment on राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री रिजालको पालामा हट्यो नक्साबाट चुच्चो भाग !
३२ जेठ, काठमाडौं । ‘धेरै पत्रकारले त्यस्तो ठाउँमा कसरी जनगणना गराउनु भयो ? डर लागेन, कत्रो हिम्मत् ? भनेर सोध्छन् । उनीहरूलाई भन्ने गरेको छु–निर्विवादित क्षेत्रमा निर्भीकताका साथ जगगणना गराएँ । त्यतिबेला लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्नेमा कहिँकतै विवाद थिएन ।
भारतको धार्चुला, पिछुवागढतिर जनगणना गर्न गएको भए पो समस्या हुन्थ्यो त । मेरो मुलुकुभित्र जनगणनाका लागि जाँदा के को डर ? कसको डर ?’ योे भनाई हो, २०१८ सालमा डोटी, बैतडी र डडेलधुरामा जनगणना गराएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको । उनी २०१७ सालमा २६ महिना तथ्यांक विभागको ‘रिजनल अफिसर’ मा नियुक्त भएका बेला आफूले नाभी, कुटी, गुञ्जी लगायतका क्षेत्रमा जनगणना गराएको बताउँछन् ।
नेपालले चुच्चो बिनाको नक्सा प्रकाशन गर्ने बेलामा वीरेन्द्र राजा भईसकेका थिए । त्यस हिसाबले राजा वीरेन्द्रको पालामा नक्सा प्रकाशन गर्दा चुच्चो भाग हटेको देखिन्छ । २०३० देखि २०३२ सालसम्म प्रधानमन्त्री थिए, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल । त्यतिबेला यो प्रकरणमा रिजालको प्रत्यक्ष भूमिका थियो÷थिएन भन्ने नखुलेको उनका मन्त्रीमण्डलका एक सदस्य बताउँछन् ।
४० हजार हेक्टरको चुच्चो सुगौली सन्धिले सीमा नदी निर्धारण गरेको काली नदी पूर्वका नाभी, कुटी, गुञ्जी लगायतका भूभाग नेपालको नक्सामा नपरेपछि भारतलाई अतिक्रमण गर्न सजिलो भएको देखिन्छ । यद्यपि नेपालको नक्साभित्रै भूभाग पनि अतिक्रमण गर्न भारतले छोडेको छ ।
यो क्षेत्रमा सिमा विवाद रहेको भारत स्वयमले समेत स्विकारीसकेको छ । थियो नेपालको नक्सामा चुच्चो भाग जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालको नक्सामा थियो, ५८ वर्ष पहिले । त्यो त हाम्रो जमिन छँदै थियो नि । कुन देश बेचुवाले बेच्यो । देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्‍यो, नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ ।’
कोरोना संक्रमण रोक्न अमेरिकाले भन्दा रुसले राम्रो काम गरिरहेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दाबी
क्वारेन्टिनबाट घर गएका ३१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि